Falstiin Iyo Sidey Isu Bedebedeshey
USA, 30 Nov 2012 (Alldhooftinle.com)
Hubsiimo Hal Baa La Siistaaye Ma Run Baa Falastiin Sagaal Wadan Oo Keliya Ayaa Diidey?
Waxa ka dhacay shalay magaalada New York cod loo qaaday in Falastiiniyiintu ka noqdaan korjooge qaramada midoobay. jagadaas oo aan gaadhsiisnayn xubinimo buuxda, iyadoo kuwii xubinimada haystayba aanay faa'iido ka helin UNta. Hadana waxay arintani Falastiiniyiinta u ahayd guul xaga niyada ah. Iyadoo aanu golahaasi weligii meel marin go'aan lagu farxo oo falastiiniyiinta u wax u tara.
Laba sana ka hor ayaa Mareekanku sheegay inuu veto saarayo markii ay falastiiniyiintu keeneen arji ay ku codsanayeen in xubinimo buuxda la siiyo. Taasoo ay la noqdeen falastiiniyiintu Markii uu socon waayey Mareykanka dartiis.
Bal Fiiriya sida Falastiin isu bedeshay 60kii sano ee la soo dhaafay
Hadaba waxaa isweydiin leh waa kuwee sagaalka wadan ee diidey inay Falastiiniyiintu helaan inay UN ta ag joogaan. Iyagoo aan xubin ka ahayn. warbaahinta Yuhuuda iyo Maraykankuba waxay ku celcelinayeen in 9 dal diideen codsiga falastiiniyiinta.
Laakiin markii aan u fiirsaday waxaan ogaaday inay 4 keliya yihiin ee aanay jirin sagaalka la sheegayo. Maraykanka oo Yuhuudu maamusho, waxaa soo raacay Kanada oo ra'iisul wasaaraheeda Stephen Harper uu caan ku yahay Islaam nacaybka. Wuxuu kaloo saaxiib dhow la yahay Natanyahu sidaa darteed go'aanka Kanada la yaab ma lahayn. Czech Republic oo caan ku noqday inay iska dhaadhiciyaan Maraykanka dano badan oo dhaqaalena ku qaba ayaa iyaguna taageeray Yuhuuda.
Dalka ku yaala Ameerikada Dhexe ee Panama waxaa Kanaalka dhex mara ee isku xidha Baasifiga iyo Atlaantiga dhisay Maraykanka. Kanaalkaas oo dhaqaalaha Panama ku xidhan yahay ayaa mar walba ku qasba inay Mareekanka raacaan.
Afarta dal ee soo hadhay waxay ku daadsan yihiin badweynta Baasifiga. Kuligood haddii laysu keenana waxaa qaadi lahaa garoonka kubada lagu ciyaaro.
Afartaasi waa Nauru, Micronesia, Palau, iyo Marshal Island. Wadanka Nauru dadkiisu waa 9300, Palau dadkeedu waa 20,900. Marshal Islan waxa ku nool 67,000.
Waxaad halkaa ka arkaysaa in kanada iyo Mareekanka oo keliya ay diideen ee aanay jirin sagaalka wadan ee la naadinayo.